Warar - Fiber Plant Bagasse
Fagaaraha dhirta Bagasse
Melanoma waxay ka kooban tahay 4% oo keliya dhammaan kansarka maqaarka laakiin waxay ka mid tahay dhibaatooyinka neoplasms-ka ee dilaaga ah. Dacarbazine waa daawada xulashada daaweynta melanoma ee Brazil iyada oo loo marayo nidaamka caafimaadka dadweynaha badanaa sababtoo ah qiime jaban. Si kastaba ha noqotee, waa wakiil alkylating ah qeexitaan hooseeya waxayna keenaysaa jawaab-celin daaweyn kaliya 20% kiisaska. Daawooyinka kale ee loo heli karo daaweynta melanoma waa qaali, unugyada burooyinka ayaa badanaa sameeya iska caabbinta daawooyinkan. Dagaalka ka dhanka ah melanoma wuxuu dalbanayaa dawooyin cusub, oo qaas ah oo wax ku ool u leh dilka unugyada burooyinka u adkaysta daawooyinka. Dibenzoylmethane (1,3-diphenylpropane-1,3-dione) deriska ayaa ah wakiilo antitumor rajo leh. Daraasaddan, waxaan baarnay saameynta cytotoxic ee 1,3-diphenyl-2-benzyl-1,3-propanedione (DPBP) ee unugyada melanoma ee B16F10 iyo sidoo kale isdhexgalka tooska ah ee ay la leedahay maaddooyinka DNA iyadoo la adeegsanayo tweezers indhaha. DPBP waxay muujisay natiijooyin rajo leh oo ka dhan ah unugyada burooyinka waxayna leeyihiin jaantus xulasho oo ah 41.94. Sidoo kale, waxaan soo bandhignay awooda DPBP ay si toos ah ula falgal ugu sameyso molecule-ka DNA-da. Xaqiiqda ah in DPBP ay la macaamili karto DNA in vitro waxay noo ogolaaneysaa inaan qiimeyno in isdhexgalka noocan oo kale ah uu sidoo kale ku dhici karo vivo iyo, sidaa darteed, in DPBP ay noqon karto bedel lagu daaweeyo bukaanada leh melanomas daawada u adkeysata. Natiijooyinkaani waxay hagi karaan sameynta daawooyin cusub oo wax ku ool ah.
Muuqaal sawir leh
Dulucda boqolleyda dhimashada unugga ee laga helay xarunta DPBP ee ka dhanka ah safafka melan-A iyo B16F10 ee uruurinta kala duwan. Tusmooyinka xulashada (SI = IC50 melan-A / IC50 B16F10) waxay ahayd 41.94.
Waxaa daabacay Elsevier BV
Dibenzoylmethane (DBM) waa qayb yar oo ka mid ah licorice iyo β-diketone analog of curcumin. Quudinta 1% DBM ee cunnooyinka jiirka 'Sencar' inta lagu gudajiray bilowga iyo xilliyada bilowga kadib waxay si xoog leh u joojiyeen 7,12-dimethylbenz [a] anthracene (DMBA) -lagu badiyo burooyinka naasaha iyo dhacdooyinka burooyinka naasaha 97%. Daraasado dheeri ah oo ku saabsan vivo si loo caddeeyo qaababka suurtagalka ah ee ficil-celinta xaddidan ee DBM, quudinta 1% DBM ee cuntada AIN-76A si aan u bislaan jiirka Sencar ee toddobaadyada 4-5 ayaa hoos u dhigay miisaanka qoyan ee minka 43%, wuxuu joojiyay heerka kordhinta ee unugyada epithelial qanjirka 'mammary gland epithelial' oo ah 53%, epithelium-ka ilmo-galeenka 23%, iyo stroma-ka ilmo-galeenka 77%, markii jiir la dilay intii lagu jiray wajigii ugu horreeyay ee wareegga wareegga. Intaa waxaa sii dheer, quudinta 1% DBM ee cuntada jiirka 'Sencar' 2 usbuuc ka hor, inta lagu jiro iyo 1 usbuuc kadib daaweynta DMBA (isku-darka 1 mg DMBA halkii jiir hal mar usbuucii 5 toddobaad) ayaa la joojiyay sameynta wadarta guud ee DMBA-DNA ee caanaha naaska qanjidhada 72% iyadoo la adeegsanayo tijaabada calaamadeynta ka dambeysa-32P. Sidaa awgeed, quudinta 1% DBM cunnooyinka loo yaqaan 'Sencar jiirarka' ayaa xannibaya sameynta DMBA-DNA ee qanjidhada naasaha waxayna hoos u dhigtay heerka kordhinta qanjidhada naasaha ee vivo. Natiijooyinkaani waxay sharxi karaan ficilada xakameynta adag ee DBM cuntada ee kansarka kansarka naasaha.
Waqtiga boostada: Aug-12-2020